Recently, mining activity has been increased in Karen State. In the community, people have little education about mining. Therefore, this educational book, “Mining and its Effects”, was produced so that people can gain some basic knowledge about mining. This Karen Language book provides different kinds of information on topics including mercury, arsenic, lead, cadmium, and antimony and their effects. Readers will learn what mining is, and how mining can cause social, health, and environmental problems.
လတ်တလောအခြေအနေတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေအောက်သယံဇာတ တူးဖေါ်ရေးလုပ် ငန်းများများ ပွားလာလျက်ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် မြေအောက်သယံဇာတတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆိုး ကျိုးကောင်းကျိုးများမည်ကဲ့သို့ရှိသည်၊ စသောအသိပညာများမှာလူထုတွင် အလွန်နည်းပါးနေပါသည်။ ဤ ပညာပေးစာစာအုပ်ကို(ကရင်ဘာသာ) ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်မြေ အောက်သယံဇာတတူးဖေါ်ရေး လုပ်ငန်းများပြု လုပ်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့သော ဆိုးကျိုးများလိုက်ပါ လာနိုင်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူထုမှလေ့လာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဤပညာပေးစာအုပ်တွင် mercury (ပြဒါး)၊ arsenic (အာစဲနစ်)၊ lead (ခဲ)၊ နှင့် antimony (ခနောက်စိမ်း) အပါအဝင်မြေ အောက်သယံဇာတတူးဖေါ်ရေး နှင့်ပတ်သက်သော ဆိုးကျိုးအမျိုးမျိုး၊ မြေ အောက်သယံဇာတ တူးဖေါ်ခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူထုနှင့် လူထုကျန်းမာရေးကို မည်ကဲ့သို့ သောဆိုးကျိုးများပေးနိုင်သည်၊ စသည့်အကြောင်းအရာများကို လေ့လာနိုင်မည့်ဖြစ်သည်။